Ekpere Nwa Atụrụ ahụ Dị Umeala n'Obi? Tame, chịrị ma kee [Ịhụ n'anya]
Ekpere nke obere nwa atụrụ. Nwa atụrụ nta ahụ bụ anụmanụ nke Chineke ji sachapụ mmehie nke ụwa. Nke a bụ ihe mere Ekpere nke Onwe-umeala Ọ bụ omume nke okwukwe sitere na akwụkwọ nsọ.
A na-eme ọtụtụ ekpere a site na mkpa ịchọrọ.
Agbanyeghị, ebumnuche kachasị ewu ewu bụ ịzụta mmadụ dịka nwa atụrụ bụ ihe nnọchianya nke ịdị nwayọ.
Ihe onodu nke ihe anumanu nke anumanu nke neme ka onodu ya puta ihe bu udo ya.
Mgbe agachara, arutu aka na akuko a, karie juo na nke a bu onye anyi n’ekpe ekpere.
1 Ekpere nke atụrụ di nwayọ
1.1 Ekpere nke atụrụ dị nwayọ maka onye ọ hụrụ n'anya
1.2 Ekpere dị nwayọ nwa atụrụ, mee ka ya guzosie ike
1.3 Iji chịkwaa ndị iro
1.4 Ekpere nke nwa atụrụ di nwayọ maka onye isi
Ọ bụ ezie na anụmanụ na-anọchite anya nwa atụrụ dị nwayọ, nke a bụ ihe oyiyi dị nsọ nke ndị kwere ekwe na-eji na-ekpe ekpere ha.
A na-ezo aka na nwa atụrụ ahụ dị nsọ na Bible, ọkachasị na akwụkwọ ozi Dabere na Saint John, ya mere ọ bụghị ihe ijuanya n'ozizi Ndị Kraịst.
Ọ na-apụta na aura dị n’elu isi gị na egosiputa idi nso; Ọ na-ejide obe nke na-egosipụta àjà ọ chụrụ maka nzọpụta nke mmadụ, n’otu aka ahụ, ọkọlọtọ ọcha na-egosi dị ka akara nke udo nke enwere ike ịhụ n’azụ.
Ọ bụ eserese na-egosi udo, udo na ịdị nwayọ.
Ekpere nke atụrụ dị nwayọ maka onye ọ hụrụ n'anya
Ekwerem m gi (aha onye ichoro iko) n’aha Jisos, Meri na Josef.
Site n'okwu ndi a, a na m agwa gị ọzọ… ka i wee bịakwute m dịka nwa atụrụ dị nwayọ nwayọ ma jupụta n'ịhụnanya na nlebara m anya, ihe okike Chukwu, achọrọ m ka i chee naanị banyere m ma mee ya jupụta n'ịhụnanya.
M ... (aha gị) na-agba gị ume, nwoke m (ma ọ bụ nwanyị m).
N'aha nke mmụọ nke ọchịchị, m ... na - achị isi uche gị ise, mkpebi ikpe gị, echiche gị, na uche gị: ka ị ... wee bụrụ onye a na - achịkwa, na - adị nwayọ n'ụkwụ m ma bụrụ onye jikọrọ m, ma na ugbu a dị ka ọdịnihu.
Na mgbe m 'hụrụ ya' ma ọ bụ hụ m. Mgbe m ... nụrụ ya, ọ ga-anụ olu m. Mgbe m ... lere ya anya ... (ma ọ bụ) na-ele m anya. Mgbe m ... metụrụ ya aka ... (ma ọ bụ) metụrụ m aka.
Na mgbe m ... rie ude ọ ... (ma ọ bụ ya) na-eze ume.
N ’uche gị ise a, uche gị, obi gị na obi gị, ka a ga-ekebere m ruo mgbe ebighi ebi n’otu echiche ahụ. Site na Chineke ka m na-arịọ maka ya, na n’onwe m agwa m ya. Amen
Mgbe a na-ekpegara nwa atụrụ a hụrụ n'anya ekpere, ịdị nwayọ ya ga-abụ ike n’ihi na ọ nweghị onye ka ya mma nyere anyị aka ichekwa udo anyị na-enwekarị n’ihi ọnọdụ ndị anyị na-enweghị ike ịchịkwa.
N'ịhụnanya, ọtụtụ n'ime ọnọdụ ndị a dị mgbagwoju anya na-eme.
Onye ị hụrụ n'anya nwere ike ịnọrọ eme omume n’ụzọ adịghị y nke ahụ na-emebi udo nke uche anyị. Ekpere di ike na onodu ndi a anyi nwere ike ijide ya.
Ike adịghị mma na-esikwa n'ụlọ ebe atụrụ na-anọkarị n'ekpere ụbọchị ọ bụla, ọ bụrụ na ọ bụ ya na ezinaụlọ ahụ niile, ọ ka mma.
Ekpere dị nwayọ nwa atụrụ, mee ka ya guzosie ike
Imeri, merie, merie.
Jizọs Kraịst bụ onye meriri. Dịka nke a bụ nnukwu eziokwu, ana m emeri ……. , dika obi oma dika aturu abiakwasi ukwum dika Jisos Kraist gabigoro nelu obe.
Mee nwayọ obere nwa aturu ị nọ n’elu ebe ịchụàjà, merie ndị iro m na-emegide m; ka obi m tinye na nke ya, dika Jisos Kraist biara n’ime mmadu, wee ziga Senti Lazarọs, ọnwụ O meriri, dika m aghaghi imeri onye iro a nke …… jiri abuo ka m lere gi, ato ato m jidere gi, obara nke Jisos Kraist obi m geme gi.
A huru m onye iro m kpuo ìsì na ogwe aka ya abaghị uru.
Ọbara Jizọs Kraịst jụrụ m, agaghị m enye ya. A na m arịọ gị, Onye-nwe-anyị, ka ị kpọta m na ……, na ị ga-ewetara m ya, nyefere m n'ụkwụ m, merie na nkụda mmụọ: ị nwere ike imeri ya.
Ọ bụrụ na ihe ekwensu nwaa imegide m, ee a Ikpe Ziri Ezi ọ na-ahapụ, ọ gaghị emeri; ọ bụrụ na o tinye ndị na-agbachitere ya, ha nile ga-ajụ. Jesus Christ, I ga-ano na mu dika aturu, ma I lee anya n’ihu m, ha nile ga-ada mba.
Ekpri obere nwa atụrụ a dị nwayọ nke nwere ike ịchị, na-achịkwa na tie dị ike!
Ekwesiri iji obi anyi dum kpee ekpere ma wepu obi ojoo.
Rịọ ikike ịchị ma kee mmadụ abụghị omume nke ịchọ ọdịmma onwe onye kama ọ bụ nke ịhụnanya maka na ọtụtụ oge echiche onye ọzọ apụtaghị na ọ bụ ebe a ka ekpere a bụrụ naanị ngwa agha anyị kachasị ike.
Na mgbakwunye, ọ metụtara naanị di na nwunye ahụ mana n'ọnọdụ ọ bụla ọzọ ọ dị mkpa ka anyị chịkwaa ka ihe ghara ịgafe njikwa.
Otu osila dị, ihe kachasị ike na ekpere a ma ọ bụ ọzọ niile bụ okwukwe nke enyere ha, ọ nweghị ekpere a na-eme na okwukwe nke anaghị enweta azịza.
Iji chịkwaa ndị iro
Nwa atụrụ dị nwayọ dị nwayọ ị hụrụ n’elu ebe ịchụ-aja, nyere m aka ka m chịa ma merie ndị iro niile na-emegide m, nke na-etinye obi m ike na ya, dị ka mmadụ n’onwe anyị Jizọs Kraịst, onye anyị hụrụ n’anya, dịka onye nyere iwu na Lazarọs onye meriri, dịka ọchịchọ Emeriwo m onye iro m dị aghụghọ, n’oge dị nsọ a a na m elele gị, m jidere gị ma kee gị agbụ, maka ọbara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst wụsịrị, obi ya tiwara etiwa.
Ezigbo Nna m, Ọkpara m na Mmụọ Nsọ, Gị onwe gị bụ otu ezi Chukwu, kwe ka onye iro m bịa ido onwe m n'okpuru ma rubekwa isi, dịka nwa gị nwoke kacha hụ n'anya gara osisi.
Ahuru m onye iro m ka o bia, ya na ogwe aka ya adighi ike wee kpuchie ya kpuchie anya, Ma oburu na aju m ajuju ọbara gi, agagh enye ya ya.
A na m arịọ gị onyenwe m ukwu ka ọ bịakwute m, na nchegharị ma nyefere m n'ụkwụ m, chịa, merie ma nwee aha, iji merie ya site n'ike gị dị ike.
Ọ bụrụ na onye iro m abịa ịnwale ihe megide m, chịa onyenwe m ma ekwela ka a kpọọ ya, ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkpọga m n'ikpe, gọnarị onye mgbachitere ọ bụla o nwere. Jizọs Kraịst kacha hụ n’anya, dịka nwa atụrụ ka ị ga-anọ n’ime m, n’ihi na mgbe onye iro m hụrụ ọnụnọ m, a na-echighachitere ya ihe ọjọọ niile.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchị ndị iro, nke a bụ ezi nwa atụrụ dị mma.
Ihe ọ bụla nke na-ezu ohi udo anyị, nke na-enye anyị nsogbu, na-eme ka anyị daa mbà ma ọ bụ mee ka anyị nwee ahụ iru ala bụ ọnọdụ ebe ekpere a nwere ike ime ka anyị nwetaghachi ikike nke ime mmụọ anyị.
Inwe ike n ’ọnọdụ nwere ike ibilite na ndị niile kwupụtara onwe ha ndị iro anyị nwere ike ime ọtụtụ ihe na nsonaazụ ọnọdụ ndị ahụ.
Ekpere a di ike ga - enyere anyị aka idobe onwe anyị na onye ọ bụla.
Ihe n’agbanyeghi onodu ya.
N'otu aka ahụ, a ga-ewepụkwa mmetụta ọjọọ ndị ahụ niile nke ndị iro anyị na-ebuso ịkpọasị na iwe na gburugburu anyị.
Ihicha ụlọ na azụmaahịa anyị pụọ na mmetụta ọjọọ ọ bụla bụ ihe dị mkpa iji nọgide na-ejide ihe omume na mkpebi ndị metụtara ndị iro anyị.
Ekpere nke nwa atụrụ di nwayọ maka onye isi
O buru na ichoro ime ka obi juo onye isi gi, ị nwere ike ikpe ikpe ọbụla n’elu. Naanị ga-edochi aha gị.
Ndị isi anyị nwere ike ime ka ndụ anyị sie ike mgbe ụfọdụ.
N'ọtụtụ oge, ịhapụ ọrụ abụghị nhọrọ a ga-atụle ma ọ bụ n'oge ndị a ka akwadoro ịme nke a ekpere iji zụọ onye isi anyị ma wee belata nrụgide nke ọrụ.
Ọnọdụ ọnọdụ ndị a ka a na-ahụkarị n'ụlọ na gburugburu ebe anyị nọ ma ọ dị mkpa na anyị nwere ike ịhapụ onwe anyị pụọ na mkpọtụ ọjọọ ndị a tupu ha emebie onye ọ bụla nso.
Okwukwe, ibu ọrụ na karịa ezi ebumnuche niile kwesịrị ịbụ injinịa anyị ikpe ekpere ọ bụla n'ihi na ọ bụ naanị mgbe ahụ ka anyị ga-enweta azịza anyị chọrọ.
Ihe dị mkpa bụ na Ekpewo ekpere nke nwa atụrụ dị nwayọ n’okwukwe ya na otutu nkwenye n'ime obi ya.
Iche iche, Ebumnuche
Nrọ Banyere Aal